Izindaba - iSolarEdge yephula ilungelo lobunikazi le-inverter leHuawei | Isinqumo senkantolo yaseChina sokukhokha izigidi eziyishumi zama-yuan
ISolarEdge yephula ilungelo lobunikazi le-inverter likaHuawei | Isinqumo senkantolo yaseChina sokukhokha izigidi eziyishumi zama-yuan
Umkhiqizi we-inverter waseChina uHuawei uthe ngoLwesihlanu ukuthi i-Guangzhou Intellectual Property Court ikhiphe isinqumo sokuthi iSolarEdge yephule omunye wemikhiqizo yayo ye-inverter ekhiqizwe futhi yathunyelwa uphiko lweJabil Circuit (Guangzhou) Ltd. kanye nezinye izinkampani ezimbili ezisizayo eChina. Lesi sinqumo sihlobene nelinye lamacala amathathu okuphula umthetho afakwe yiHuawei kuSolarEdge enkantolo yaseChina ngoMeyi. Le nkampani ithe inkantolo iyalele iSolarEdge ukuba "iyeke ngokushesha ukwephula umthetho" futhi ikhokhele iHuawei imali eyizigidi eziyishumi (US $ 1.4 million). Ezinye izidingo ezimbili zeHuawei zisabhekwa.
Ephendula, okhulumela abakwaSolaredge utshele i-Photovoltaic Magazine: "Siqaphele ukuthi lesi yisinqumo sokuqala senkantolo yendawo yaseChina, futhi isinqumo singasetshenziswa kuphela kuze kube iNkantolo eNkulu yaseChina ifaka isicelo." Inkampani yanezela, Isinqumo sihlobene kuphela nenguqulo yakudala ye-inverter engasasebenzi ekukhiqizeni, futhi ngeke ithinte i-inverter eyenziwayo noma esatshalaliswa njengamanje. Isikhulumi sithe: "Ngakho-ke, ngeke sibe nomthelela ekuthengisweni kweSolarEdge."
Umenzi uhlose ukudlulisa isinqumo.
Ephendula lolu chungechunge lwezehlakalo, okhulumela iHuawei uke wathi uHuawei ubengummeli oqinile futhi ohlomulile ngokuvikela impahla. Isipiliyoni seminyaka eminingi sitshela iHuawei ukuthi kuphela ngokuhlonipha ngokugcwele nangokuvikela amalungelo empahla yengqondo, ukugqugquzela ukuncintisana okulungile nokusebenzisana nabalingani ngalezi zisekelo lapho i-huawei ingagcina ukuqamba nokuncintisana, idale inani elikhulu lamakhasimende, iphinde iqhubekise phambili inqubekela phambili yezobuchwepheshe nentuthuko yezenhlalo ikusasa.
ISolarEdge iphinde yafaka amacala amathathu abhekene neHuawei ezinkantolo zaseJinan naseShenzhen ngo-Okthoba.